Atlanticzọ Ọhịa Atlantic, okporo ụzọ dị n'ụsọ oké osimiri na Ireland | Akụkọ Njem
Wild Atlantic Way, okporo ụzọ dị n'ụsọ oké osimiri na Ireland
Mariela Carril | | Nduzi, Ireland
A ezi ụzọ inyocha Ireland si green na ndị mara mma Okirikiri bụ ịgbazite ụgbọ ala. Nke mbu ị gha agha ihu akụkụ nke obodo ị ga-achọ ileta wee hụ ọtụtụ ebe mara mma na-apụta ma taa, na mgbakwunye, ọtụtụ ụzọ njem nleta na-emezi ka ọdịmma dị iche iche nke ndị ọbịa.
Yabụ, Ireland na-enye anyị ka anyị mara peninsulas, sọfụ osimiri ya, na-enyocha ugwu, mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ na-arụ ọrụ megalithic, mmiri na ngọzi nke oke osimiri Atlantic. Nke ahụ bụ ihe Atlanticzọ Ọhịa Atlantic.
1 Atlanticzọ Ọhịa Atlantic
2 Lọ ndị dị n'okporo ụzọ Wild Atlantic
3 Ulo tinyere Wild Atlantic Way
Atlanticzọ Ọhịa Atlantic
Ọ bụ ụzọ na-ekpuchi kilomita 2600 ya mere, ọ bụ otu n’ime ụzọ ọdụ ụgbọ mmiri kachasị ogologo n’ụwa. Na-eje ije na n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Ireland bido na mpaghara Inishowen Peninsula dị na mgbago ugwu rue obodo Kinsale, na County Cork nke akụkọ ihe mere eme, na ndịda
Ọ bụ njem pụrụ iche pụrụ iche maka ndị hụrụ ya n'anya ọdịdị na ala ya. Ala na oke osimiri jikọtara ọnụ na kilomita ndị a niile na-egosi ọdịiche ha (ngwaahịa nke mbute mgbe niile n'etiti mmiri na ala, n'agbata ikuku na ụsọ mmiri), na-ese ọnụ ọnụ ugwu, ịchacha bays, imebi osimiri, ime obodo dị iche iche, ihe ncheta oge ochie na ihe ebube ndị ọzọ.
N’akụkụ aka n’ụzọ thezọ Oké Osimiri Atlantic na-amalite na Inishowen Peninsula, Na Obodo Donegal, gafere mpaghara Leitrim, Sligo, Mayo, Galway, Clare, Limerick na ógbè Kerry ruo mgbe agwụcha Cork. Can nwere ike kee ya 14 isi ma ọ bụ nkebi tinyere kilomita 2600 ahụ. Dee saịtị saịtị ndị a nke ọ bụla n'ime ha:
Site na Derry na Letterkenny: Ala Inishowen.
Site na Letterkenny rue Bunbeg: Fanad Isi.
Site na Bunbeg ruo Donegal City: the Slieve n'ụsọ oké osimiri.
site na Donegal na BNallina: Donegal Bay na Sligo.
Site na Ballina ruo Belmullet: Erris.
Site na Belmullet ruo Westport: ndị Agwaetiti Achill na Clew Bay.
Site na Westport ruo Clifden: Port nke Killary.
Site na Clifden gaa Galway: Connemara.
Galway na Kilkee: Ndị Burren na West Clare.
Site na Kelkee ruo Tralee: the Shannon Estuary.
Site na Tralee gaa Castlemaine: the Peninsula nke Dingle.
Site na Castlemaine rue Kenmare: Mgbanaka nke Kerry.
Site na Kenmare rue Durrus: Isi nke Beara na nke Atụrụ.
Site na Durrus ruo Kinsale: West Cork.
Osimiri, ugwu, obodo nta ndị dị n'ụsọ oké osimiri, isi ala okwute, nnukwu ugwu dị egwu, ọkụ ọkụ, agwaetiti, ogige ntụrụndụ mba, osimiri, whale, dolphins, ememme ọdịbendị, na oke ọhịa. Obere ihe niile. N’okporo ụzọ a, ị ga - enwe osimiri oke udo na ndị ọzọ, na - eme mkpọtụ. Iji nweta ọtụtụ uru na ya, Tourlọ Ọrụ Irish Tourist na-enye gị Anụmanụ Wild Way Way Passport, ihe ncheta pụrụ iche iji mezue njegharị ahụ.
Paspọtụ ọ na-efu naanị 10 euro na ị na-azụ ya na ụfọdụ post ọfịs n'ụzọ. Ọ bụ akwụkwọ na-acha anụnụ anụnụ nke nwere eserese nke Ireland na mkpuchi nke ị na-ezipụ stampụ ị nwetara n'oge nzụta na nke dabara na ebe dị iche iche Ihe nchọpụta (dika akpọrọ ha), n'okporo ụzọ. Are na-akàrà ebe ndị ị gara na ezigbo bụ iji wuchaa saịtị 188 na stampụ 118.
Mgbe ị rutere na nke mbụ 20 ị nwere ike ịkpọtụrụ Office nke ndị njem na a ga-enye gị onyinye. Paspọtụ Ọ bụ ihe akaebe na ị gara akụkụ a nke Ireland, na ị njem 2500 n'ụsọ oké osimiri kilomita ma si otú ahụ nweta Akwụkwọ Asụsụ Wild Atlantic, Ọchịchị nke ọma. Ihe bụ ihe ọzọ, nwere ozi bara uru banyere ụzọ na ebe nkiri ya.
Akwụkwọ ikike ngafe ọ bụla a na-ere nwere nọmba akọwapụtara nke ọma bụ ịdebanye aha ya na weebụsaịtị ha n'ihi na n'ikpeazụ ị nwere ike isonye na zoo iji merie ndụ gị niile n'okporo ụzọ Wild Atlantic.
Lọ ndị dị n'okporo ụzọ Wild Atlantic
Ruo ugbu a anyị ahụla na ụzọ dị n'ụsọ osimiri na-elekwasị anya na Nature mana eziokwu bụ na ị ga-ahụkwa nnukwu ụlọ. Enwere ọtụtụ, mana asaa kacha pụta ìhè. Ọmụmaatụ, na Donegal ị pụrụ ọbụna ịnọ ma ọ bụ rie na a nnukwu ụlọ tụgharịa nkwari akụ, na Hotel Solis Lough Eske. Ọ bụ ụlọ ezumike kpakpando ise malitere na narị afọ nke XNUMX ma bụrụbu nke ezinụlọ O'Donnell, nna nna Donegal.
Na Galway enwere kwa Allylọ Ballynahinch, gbanwekwara na họtel. Ọ dị n'akụkụ Osimiri Owenmore, n'ala nke bụbu ezinụlọ ndị O'Flaherty. Na Clare, ụlọ nkwari akụ ọzọ bụ Glọ Gregan. Ọ bụ ezigbo ụlọ nkwari akụ ịnọ na Burren, ebe ala nzuzu na-adịghị mma nke mere ka JRR Tolkien dee Onye nwe anyi.
Na Kerry bụ Allylọ Ballyseede, na Tralee. Ọ bụ ebe mara mma, ụlọ nkwari akụ anọ, ụlọ mbụ nke Earls nke Desmond na, ha na-ekwu, na mmụọ! Na-eso, na Cork bụ Mondlọ Desmond, na-emeghe ndị ọbịa naanị site na nduzi. Ọ bụ Earl nke Desmond wuru ya na narị afọ nke XNUMX ma taa ọ bụ International Wine Museum. Na Gulọ Dunguaire, na Galway, bụ ụlọ elu ụlọ mgbe ochie nke O'Hynes wuru na 1520. Ọ bụbu ebe nzukọ maka WB Yeats na Lady Gregory, n'oge dị elu nke mmalite Celtic.
N'ikpeazụ, na Leitrim bụ Ezigbo Parke, nke dị n'akụkụ Lough Gill. Ọ bụ nnukwu ụlọ site na oge Ọgbọ (oge ndị Bekee kpọbatara ndị Bekee na ndị Welsh ka ha biri na Ireland, na-anapụ ala ezinụlọ ndị Irish). N’ezie, a kpọtara onye nwe ala ndị a na London ma gbuo ya na 1591.
Ulo tinyere Wild Atlantic Way
N’okporo ụzọ a ị nwere ike ịnọ nke ọma ma maa mma Ndina na nri ụtụtụ, gbazite ụlọ nkeonwe nyere ndị njem nleta ma ọ bụ nkwari akụ. Na weebụsaịtị nke ụzọ dị n'ụsọ oké osimiri ị nwere nhọrọ nke nhọrọ atọ a.
Cheta na ọ bụrụ na ịnaraghị ụgbọ ala gị na Ireland ị nwere ike ịgbazite otu ma ọ bụ ọbụlagodi, iji mee ka ọ dịkwuo mfe ma ọ bụ mara mma. Companylọ ọrụ West Coast Camper Van nwere ọtụtụ ndị njem na-enye gị ohere iburu ụgbọ ala n'ọtụtụ ebe n'akụkụ ụzọ dị n'ụsọ oké osimiri. Banyere ụgbọ ala, ị nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na Ireland (Avis, Sixt, Europcar, wdg).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ireland » Wild Atlantic Way, okporo ụzọ dị n'ụsọ oké osimiri na Ireland
Gaa na osimiri nke Dubrovnik
6 European osimiri ebe ịgbaba na-